Toni Kroos oo ka hadlay wararka xanta ah ee la xiriirinaya horyaalka Chinese Super League & xiliga uu iska casilayo kubadda cagta – Gool FM
(Spain) 26 Juunyo 2019. Xiddiga khadka dhexe ee reer Germany iyo kooxda Real Madrid ee Toni Kroos ayaa ka hadlay wararka xanta ah ee sheegayay maalmihii lasoo dhaafay suurtogalnimada uu xirfadiisa ugu soo gabagabeyn karo horyaalka kubada cagta ee Chinese Super League.
Toni Kroos ayaa iska diiday in mustaqbalkiisa ciyaareed uu ku soo gabagabeyn doono horyaalka Chinese Super League, isaga oo sheegay in uu horey u diidey dalabyo badan oo ku wajahan arintan.
Xiddiga kooxda Real Madrid ayaa wareysi uu ku bixiyay wargeyska “Bild” ee dalka Jarmalka wuxuu ku sheegay:
“Waxaan si buuxda u diidi karaa arrintan, ka ciyaarista horyaalo badan sida Mareykanka, Shiinaha ama Qatar waa wax aad u fog”.
Toni Kroos ayaa kula jira kooxda Real Madrid heshiis gaaraya ilaa iyo 2023, wuxuuna 29 jirkan uu ku adkeysanayaa inuu tixgelin doono dhamaan xulashooyinka kale oo ay ka mid tahay inuu ka fariisto ciyaaraha kubadda cagta, kaddib marka uu dhamaado qandaraaskiisa haatan ee Los Blancos.
Kroos oo arintaas ka hadlayay ayaa wuxuu yiri:
“Mudada qandaraaskeyga kooxda Real Madrid ayaa si taxadar leh loo doortay, da’a ahaan 33 jir ayaa ii fiicnaan inaan kaga fariisto ciyaaraha kubaddda cagta, kadibna waxaan heli doonaa fursad fiican oo aan ku dooran karo”.
“Heshiiskii aan kaga soo dhaqaaqay Bayern Munich ee aan ku imid Real Madrid wuxuu ahaa go’aankii ugu fiicnaa ee aan sameeyay xirfadeyda kuadda cagta”.
Alexis Sanchez oo talo-celin muhiim ah ka helay mid ka mid ah halyeeyada kubadda cagta